Mumaawa mashoma anotevera Apple inogona kuzivisa yayo nyowani Yekutsvagisa Triangle Park kembasi | Ndinobva mac
Apple haimire kuwedzera munzvimbo nyowani muUnited States. Nzvimbo yakanaka yeKambasi muNorth Carolina yakatsvakwa kwenguva yakareba., nehungwaru hwese kuti Apple inoda kuisa mari mune izvi. Chatinoziva ndechekuti pakutanga kwegore, Apple yakazivisa kuti yaifarira munda mutsva muUnited States.
Gare gare mishumo inotaura izvozvo iyo Campus yaizove iri Research Triangle Park, kuNorth Carolina. Apple ingadai iri yekuda kuikurukura kune vezvenhau, zvinofungidzirwa kumusangano wevashanduri uchaitwa svondo rinouya.
Isu tinoziva nhau kuburikidza ne yepakati svikiro WRAL, kupi musangano pakati pevamiriri venyika yeNorth Carolina nevamiriri veApple wakaratidza kuva "nani zvakanyanya kupfuura chero munhu aifungidzirwa". Kupa Apple ruoko rwakakura kuti utaure nhau kune vezvenhau.
Apple ingadai yakavhara kutaurirana mushure mekusimbiswa kwemitsara yemitero inokurudzirwa nekanzuru yaDonald Trump. Ngatiyeukei kuti danho rekutungamira kweUS rine mutero uye makambani anotsiva kugadzirwa kwekunze kugadzirwa kwemumba muUS Mumushumo wekuti vezvenhau vemo vakawana yekudyara kwechipiri kunosimbiswa, mune chii chichava nzvimbo yedata, ino nguva kumadokero kweNorth Carolina.
Apple yaisazove iri yega kambani mudunhu iri. Sezviri pachena, Amazon ingavewo inofarira kuvhura HQ2 ipapo. Mari mbiri idzi dzaizokwezva huwandu hwakawanda hwevashandi munzvimbo iyi.
Apple ingadai ichitsvaga dzimbahwe muKutsvagisa Triangle Park. Pane kudaro, Amazon inenge ichitsvaga chimwe chinhu chakanyanya pakati, saRaleigh.
Nepo Tsvagurudzo Triangle Park ichikwanisa kupa yakawanda ivhu, senge ma120-acre Park Center, ine nzvimbo inoshandisa akawanda, Amazon inogona kubata anopfuura mamirioni matanhatu emamirimita emahofisi nzvimbo.
Makambani ese ari maviri akaenderera mberi nenzira dzavanozovhura nzvimbo yavo. Tinotarisira kusimbiswa mumazuva mashoma anotevera.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » apuro » Noticias » Mumaawa mashoma anotevera Apple inogona kuzivisa yayo nyowani Yekutsvagisa Triangle Park kembasi
Gara uine mafaera ako achangovhurwa neTrickster anobatsira